पाको मानिससँग उठबस गर्न मनपर्छः मोडल स्मिता थापा
काठमाडौं । नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा स्मिता थापा एक चर्चित नाम हो । विभिन्न हर्कत देखाएर उनी सँधै चर्चामा आइरहन्छिन् । उनलाई आधार मानेर लेखक राजेन्द्र थापाले खेलौना नामक पुस्तक समेत लेखिसकेका छन् । ‘मलाई......
‘गलबन्दी’ गीतकी लजालु मोडलको हट फोटो
काठमाडौं । करीब १५ मिनेट लामो एउटा गीतको भीडियो यतिवेला युट्यूबमा ट्रेन्डिङमा छ । केही दिनअघि युट्यूबमा अपलोड भएको यो भिडियो लाखौंले हेरिसकेका छन् । गायक प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारले गाएको यो गीत......
आफुमाथि अन्याय गरेको भन्दै ‘सुपर मम’हरुले ताज फिर्ता गरे
काठमाडौँ । गत बैशाख २९ गते काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘द सुपर मम’ नामक प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो । यस प्रतियोगितामा सुपर ममहरुको घोषणा गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका एक आयोजक थिइन् नेपाली रजतपटकी नायिका......
२४ वर्षीय मेगनको ‘रातो पहिरन’ले लण्डन तात्यो ! (बोल्ड तस्वीरहरु)
एजेन्सी । बेलायती टेलिभिजन रियालिटी शो लभ आइल्याण्डकी २४ वर्षीय मेगन ब्राटन हानसन ‘एक्ट्रिमली विक्ड, सकिङ्ग्ली एभिल एण्ड भाइल’ नामक ड्रामा सिरिजको प्रमियरमा आफ्नो बोल्ड अवतारमा देखा परेकी छिन् । बुधबार लण्डनमा आयोजित प्रिमियरमा......
निता ढुंगानाको फेशन !
काठमाडाैं । पछिल्लो समय थोरै चलचित्रमा मात्र देखिन थालेकी नायिका निता ढुंगाना फेशन शो तथा म्युजिक भिडियोमा पनि देखिन थालेकी छिन् । पछिल्लो समय उनी फरिया डिजाईनले आयोजना गरेको ‘ईलिजेन्ट ब्राईडल फेयर’ नामक फेशन......
नेपाल ११ औं सुन्दर महिला भएको देश (२० सुन्दरीका फोटोसहित)
एजेन्सी । कुन देशका महिला कति राम्रा छन् भनेर छुट्याउने मानक के हो ? यसको उत्तर Missosology.com ले दिएको छ । उनीहरुले सन् २०१८ मा आयोजित ठूला सुन्दरी प्रतियोगिताको विश्लेषण गर्यो र त्यसमा कुन देशका महिलाले......
फिलिपिन्सकी क्याट्रिओना मिस युनिभर्स
मिस युनिभर्स २०१८ फिलिपिन्सकी क्याट्रिओना ग्रेले बनेकी छिन् । थाइल्याण्डकको बैंककमा आज भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा फिलिपिन्सकी २४ वर्षीया क्याट्रिओनाले मिस युनिभर्सको ताज जितेकी हुन् । नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी मनिता देवकोटा पनि टप १० मा......